थाक्रे गाँउपालिकामा गठबन्धन धरापमा ! कांग्रेसको तिव्र असन्तुष्टि – Online Kendra
थाक्रे गाँउपालिकामा गठबन्धन धरापमा ! कांग्रेसको तिव्र असन्तुष्टि
१६ बैशाख २०७९, शुक्रबार १८:०१ OnlineKendra
बैशाख १६,धादिङ । थाक्रे गाँउपालिकामा गठबन्धन धरापमा परेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस थाक्रे गाँउपालिका समितीका सचिव विष्णु प्रसाद लुइटेलले नेकपा माओवादी केन्द्रले बागी उम्मेदवार उठाएको भन्दै गठबन्धन धरापमा परेको बताएको हो । लुइटेलले थाक्रे वडा नम्बर ७ र वडा नम्बर १ मा बागी उम्मेदवार उठाएकोे गठबन्धनमा समस्या परेको बताए ।
उनले माओवादी केन्द्रले तत्काल बागी उम्मेदवारलाई फिर्ता लिन नलगाए गठबन्धन टुटेको घोषणा गर्न कांग्रेस बाध्य हुने बताए । पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले वडा नम्बर १,३ र ११ माओवादी केन्द्रले २,५,६ र ९ नेकपा एकिकृत समाजवादीले ४,७,८,र १० नम्बर वडा लिने सहमती भएको थियो ।
गाँउपालिका अध्यक्षमा भने नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रले लिने सहमती भएको थियो । यद्यपी आजै पाँच दलको बालुवाटारमा भएको बैठकमा बागी उम्मेदवारी पनि तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय चुनाव २०७९थाक्रे गाँउपालिकामा गठबन्धन धरापमा ! कांग्रेसको तिव्र असन्तुष्टि
गर्भनर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता !
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता धमाधम ‘ब्याक’
८ असार २०७९, बुधबार १३:५६ NewsRoom 0
उदयपुरको प्रमुखमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने
असार ८, काठमाण्डौ । जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको प्रमुखमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच...
५ असार २०७९, आईतवार १३:५१ NewsRoom 0
असार ५, काठमाण्डौ । तनहुँ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । मुख्य निर्वाचन...
राजनीति स्थानीय चुनाव २०७९
५ असार २०७९, आईतवार ०६:२३ NewsRoom 0
इलामको जिसस प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार जयप्रकाश राई विजयी
असार ५, काठमाण्डौ । जिल्ला समन्वय समिति इलामको प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार जयप्रकाश राई विजयी भएका छन्...